Antsafa · Jona, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Antsafa · Jona, 2019
Tantara mikasika ny Antsafa tamin'ny Jona, 2019
Fantaro i Mpumie Njobe, hampiantrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang ny 26 Jona hatramin'ny 2 Jolay
Fantaro misimisy kokoa i Mpumie Njobe, mpampiantrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang ny 26 Jona hatramin'ny 2 Jolay 2019. Hozarainy amintsika ny fijeriny ny teny IsiZulu.
Sady mianatra no mampianatra ny fiteniny i Holly Helton-Anishinaabeqwa, mitantana ny kaonty Twitter @NativeLangsTech ny herinandron'ny 20-26 jona
Andao hofantarina bebe kokoa ny momba an'i Holly Helton-Anishinaabeqwa, mpitantana ny kaonty Twitter @NativeLangsTechTwitter mandritra ny herinandron'ny 20-26 jona 2019. Hozarainy amnitsika ny fomba fijeriny ny fiteny Anishinaabe.
Fantaro bebe kokoa ny momba an'i Doaa Farid Farah AbdelSayed, ilay mpampiantrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny 5-11 Jona 2019. Hizara ny fomba fijeriny momba ny fiteny Nubian izy.
Fantaro i Tochi Precious, mampiatrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny herinandron'ny 12-18 jona 2019
Andao hofantarina bebe kokoa ny momba an'i Tochi Precious, hampiatrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny herinandron'ny 12-18 jona 2019. Hozarainy amintsika ny fomba fijeriny ny fiteny Igbo.
Lanonana10 Jona 2019
Lanonana09 Jona 2019
Fantaro i Susan Gehr, ilay mpampiantrano ny kaonty Twitter @NativeLangsTech ho an'ny 6-12 Jona 2019
Fantaro bebe kokoa ny momba an'i Susan Gehr, ilay mpampiantrano ny kaonty @NativeLangsTechTwitter mandritra ny 5-12 Jona 2019. Hizara ny fomba fijeriny momba ny fiteny Karuk izy.
David Hoffman ao amin’ny Internews
Mediam-bahoaka04 Jona 2019
David Hoffman no mpanorina sady filohan'ny Internews, iray amin'ireo fikambanan’ny fampivelarana ny fampitam-baovao voalohany. Nohazavain'i David ny fomba nanombohan'ny Internews tamin'ny alàlan’ny fandrindrana ny fomba roa amin'ny fifandraisana an-janabolana teo amin’ireo tanora Sovietika tany Moskoa sy ny Amerikanina nandritra ny Fetiben'i Etazonia 1982 izay notohanan'ny mpiara-manorina ny Apple Computer Steve Wozniak.
Ny resaka mahaliana nataon'i Margot Camones Maguiña, nitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas nandritra ny herinandron'ny 20-26 mey 2019
Mediam-bahoaka01 Jona 2019
Andao hofantarina bebe kokoa ny momba an'i Margot Camones Maguiña, hampiatrano ny kaonty Twitter @ActLenguas mandritra ny herinandron'ny 20-26 20 mey19 hizaràny ny fijeriny amin'ny fiteny Quechua.